Izindlu ezenziwe ngokhuni kunezinzuzo zako siqu, ngakho ngo-inqubo ukwakhiwa zabo kudingeka ukuba banake ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukwakhiwa. Abaningi bakholelwa ukuthi izakhiwo ezinjalo ohlabayo kusuka emalungeni namakhona. Innovations ekwakheni waphinda uqinisekise yokuthi kwemijondolo kahle kuphela noma nakha izindlu. Kufanele banamathele yonke imithetho ngokuhamba ukwakhiwa izakhiwo yalesi material. ukunakwa kakhulu okufanele ikhokhwe kukhethwa izinkuni amafasitela yendlu. Abanikazi izindlu ezinjalo uyakuqaphela ukuthi kubaluleke kangakanani ebusika. Kuleso simo, uma indlu owakhiwe unomphela, amafasitela kumele bavikele ngangokunokwenzeka kusukela esimweni sezulu esibi futhi akumele kube ngaphansi efudumele kuka ezindlini zasemadolobheni. Ikakhulukazi ukuthi ezindongeni ukhuni Akuthathi isikhathi eside ngaphansi kwethonya umswakama kanye lokushisa izinguquko.
Yingakho esakhiweni yesimanje angadle ngabuhle obutheni uthanda ukufaka PVC ifasitela endlini wokhuni. isixazululo enjalo kusobala, njengoba kunezinzuzo zako. Izakhiwo uyohlale ethule, efudumele futhi ethokomele. PVC amawindi indlu yamapulangwe uzokwazi ukuvikela okuvela dampness kanye okusalungiswa njalo, okuvumela Sebawoti nezivakashi kungaba ezakhiweni ezinjalo kuzo zonke izimo zezulu. Ukufakwa design izigodo amaphrofayli aluminium okungalungile, ngoba izici izinto ezimbili kukhona ngandawonye. Lokhu ucabangela hhayi kuphela izici ezishisayo, kodwa futhi ngenxa yobuhle. It uhlala ngezinto ezimbili kuphela okungakhethwa: ukufaka PVC ifasitela endlini lokhuni noma analogue ngezinto zemvelo. Noma yimuphi umklamo kufanele kuqala kunazo zonke babe ukushisa ezinhle futhi ukwahlukanisa umsindo. Izinkuni inikeza isivikelo esihle ngenxa yamakhaza, kodwa izici conductivity ezishisayo PVC sibalo cishe kabili njengoba okusezingeni eliphezulu. Lona Inzuzo enkulu yalo iphrofayela phezu ezibonakalayo kuqala.
Ukuze ufake kahle PVC windows, kufanele ukuba ubambelele ubuchwepheshe ekhethekile, okuyinto has eziningi izici. Ngaphambi kokufaka sephrofayela ofuna ukudala i ibhokisi ezengeziwe ngokhuni lapho kuyothiwa wahlela. Lokhu kuzosiza ukwakhiwa ukumelana umthwalo kwezinkuni. Ngaphezu kwalokho, kufanele ufake eziveza amabhlogo ekhethekile izingodo ngaphansi emakhoneni bhokisi phansi. Bayokwakha uzimele.
PVC e ukufakwa indlu yamapulangwe babe ubuchwepheshe obufanayo njengoba amaphrofayli kwephaneli futhi Uhlaka izakhiwo. Abaningi bafisa ukwazi ukuthi banjani imvelo. Impendulo yalo itholwe 1997. Ucwaningo we-Australian Institute ezimele luye lwabonisa ukuthi PVC kuyinto imvelo impahla ukwakhiwa yesimanje. Ngo womshini amafasitela lokhuni asetshenziswa glulam, okuyinto enqubeni ukukhiqizwa ziphathwe zamakhemikhali. Bona ukuvikela impahla yemvelo kusuka izinambuzane bese zibola, futhi unikeze ukuphepha umlilo kanye nomswakama ukumelana. Uma ukwakhiwa izinkuni senziwa usebenzisa antiseptics futhi ukhwaliti ongaphakeme impregnations, kuzoba yingozi nomzimba womuntu. Lokhu waphinda kuqinisekisa ukuthi umkhiqizo plastic kunezinzuzo abalulekile phezu ezinye izinto, ngaphandle esikhundleni amawindi PVC kulokhu kuyoba lula kakhulu futhi lwesikhathi eside asikho isidingo kuwo.
Uphenyo ezikhishwe Kuhle. Ukubuyekezwa kwe amamodeli engcono